We Fight We Win. -- " More than Media ": အာဏာရ တွေ ကိုယ်တိုင် ရှို့နေတဲ့ မီး
အာဏာရ တွေ ကိုယ်တိုင် ရှို့နေတဲ့ မီး
ရန်ကုန် ၄၈ လမ်းရှိဆွဒီကီယာ ဟာဖိဇ် အာဂုံဆောင်ကျောင်း မီးရှို့ခံရမှု
အထက်ပါအကြောင်းများကြောင့် သာမန်မီးလောင်မှုမဟုတ်ပဲ ရှို့မီးဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပေသည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ၄၈ လမ်း၊ ဆွာဒီကီယဟ် ဟာဖွိဇ်ကျောင်း မီးလောင်မှု
သည် ရိုးရိုးမီးလောင်မှု မဟုတ်ကြောင်း၊ တမင်တကာ ကြံရွယ်ရှို့
သည့် မီးသာဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းအောက်ထပ်ရှိ မီးအားမြှင့်စက်မှာ
မီးလောင်ပြီး အတန်ကြာ မှ Alarm မြည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းကျောင်း
၏ ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ မှ သတင်းပေးပို့ပါသည်။ ၎င်းဆရာသည်
မီးလောင်သည် ဟု သိသည်နှင့် မီးငြိမ်းသတ်ရန် အတွက် ပြေးလွှား
ကြိုးစားရာ ကြမ်းပြင်တွင် အိုင်ထွန်းနေသော "ရေနံဆီ" ကဲ့သို့
ဆီများအား နင်းမိ၍ ချော်လဲခဲ့ရာ ၎င်း ၏ အဝတ်အစားများ၌
ယခုတိုင် ထိုဆီများဖြင့် ရွှဲနစ်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Eleven ကိုလုံးဝမယုံပါဘူး။ Eleven က အဲ့ဒီကိုကြိုရောက်နေတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေပြောကြပါ
တယ်။ လျှပ်တပြက်ရှိပါတယ်။ ဇေယျာမြတ်ခိုင်ရှိပါတယ်။ Sky net ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗီဒီယိုကင်မရာ
မပါပါဘူး။ ရီကော်ဒါနဲ့ပဲသတင်းယူသွားပါတယ်။ တခြားသောမီဒီယာတွေလဲအများကြီးရှိပါသေးတယ်။
၀ါယာရှော့ခ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကြုံဖူးကြမှာပေါ့ဗျာ။ ဟုတ်တယ်မှတ်လား။ ၀ါယာရှော့ခ်ဖြစ်ရင်မီးမ
SOB, there non-muslim have no right to enter mosque, if its arson then must be themself, you stupid.
Maung Moe Thee, You are sick. You need to see doctor.
သစ်ထူးလွင် ဆိုဒ်က အင်တာဗျူးရုပ်သံ မှာကြတော့
ဗွီဒီယို ကင်မရာတွေ အများကြီးဘဲ ..
ခင်ဗျာတခုခုတော့ လွဲချော်နေပြီနဲ့ တူတယ်
မိုးသီးဇွန် မင်းပြန်ယူနေတာက မင်းလုပ်ပေးတာထက်ကျော်သွားပြီ။ ဒီနေ့ တော့ မင်းဘာကောင်လည်းဆိုတာ
What I can see from burning house photo and what you are saying is different. Liar. Liar.
စောက်ရူး မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး လုပ်စားလို့မရတိုင်း အပြင်ကနေခွေးလိုဟောင်နေတယ် ..... မရတော့ဖူး မင်းလိုကောင်မျိုးအတွက် ငါတို့နိုင်ငံမှာ နေစရာ မြေမရှိတော့ဖူး နားလယ်လား။ ခွေးလောက်မှ အသိတရားမရှိတဲ့ကောင်
ရေနံဆီလောင်းပြီး မီးရှို့တယ်ဆိုပြီး ဖွနေတဲ့ မွတ်ဆလင် ကုလားများ နဲ့ ကြမ်းပြင်တွင် ရေနံဆီတွေ ဖြန်းထားလို့ ထွက်ပြေးတာတောင်ချောလဲ ရပါတယ်လို့ ဖွကြသူများ အတွက် ဤပုံသည်ပြန်လည်ရှင်းပြစရာ သက်သေကောင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံတွင် လေးထောင့်အကွက် ဖြင့် ပြထားသောကြမ်းပြင်နေရာမှ နံရံကပ်ကြွေပြား များသည်အကောင်းပကတိဖြူနေသောကြောင့် မီးဖုတ်ခံရခြင်း မရှိသည့်အတွက် ကြမ်းပြင်မှ မီးအပူချိန်ကူးဆက်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားပါသည်။
ပုံတွင်ပါ အ၀ိုင်းပြထားသော မီတာပုံးဝန်းကျင် လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများ သွယ်တန်းထားရာနံရံတစ်လျှောက်မှာတော့ နံရံကပ်ကြွေပြားများသည် အပူချိန်မြင့်မားစွာမီးဖုတ်ခံရသည့်အတွက် မီးကျွမ်းမဲတူးပြီး
ကွဲကြေနေသည်များကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် မီးသည် မိုးသီးဇွန်တို့ ဖွနေသလို ကြမ်းပြင်မှ ရေနံဆီလောင်းမီးရှို့ခံရခြင်းမဟုတ်ပဲ ၀ါယာအပူလွန်ကဲရာမှမီးထလောင်ခြင်းမှာ ထင်ရှားပါသည်ခင်ဗျာ။
အဲဒါကို ဓါတ်ဆီလောင်းပြီး မီးရှို့သလိုလို ရေနံဆီလောင်ပြီး မီးရှို့သလိုလိုနဲ့ ဖွနေတဲ့ မွတ်ဆလင်ကုလားများနဲ့ ပြည်ပျက်များ... မင်းတို့ ပြောသလို အိပ်နေတဲ့ သူတွေကို မနိုးအောင် မသိအောင် ရေနံဆီ တွေ ဇိမ်ပြေ နပြေလောင်းပြီး မီရှို့ထွက်ပြေး ရအောင် အဲဒီ မီးရှို့တဲ့ သူက တန်ခိုးရှင်တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်...
ယုံတဲ့ သူတွေကလဲ ကိုယ့်ဦးဏှောက်လေးနဲ့ ကိုယ် မှန်၏ မှား၏ ဖြစ်နိုင်၏ မဖြစ်နိုင်၏ ကို သေချာ စဉ်းစားပြီးမှပဲ ယုံကြပါလို့ ပြောချင်တယ်ဗျာ...
ေ၇နံဆီကေ၇ွထက်တောင်၇ှားနေတာေ၇နံဆီလောင်း
၇န်ကုန်မှာနေတာ အနှစ် ၂၀ နီးပါး၇ှိတော.မယ်
Moe Thee Zun @ La Phut is an ENEMY OF STATES.
He wants to see on clash then he can make money.
This is his good business.
Hi Mr. Moe Thee,
Pls explain how do someone pour fuel on fire. Why no burnt marks on outside?
Ko Moe thee.. we are trying to calm the tensions down inside the country. If you really really love the country and really want to see the peaceful develop country, STOP makingadangerous stair toward our country. I amaregular reader of your blog with all the respect but now we have so much doubt and questions of what your intentions toward Burma. Please STOP before the further damage. Please..
Thura Myo (DC/NYC)
မိုးသီးနဲ့ အဖွဲ့ လီးပဲ။ မင်းတို့ကတစ်နေ့တစ်ခြားပိုပိုပြီးတော့ ရွံဘို့ကောင်းလာတယ်။
မင်းတို့လုပ်နေတာတွေ မဟုတ်တော့ လူတိုင်းရေးတဲ့ comment တောင်မှ ပေးမတင်ရဲတော့ဘူးမို့လား။ မြန်မာပြည်ကို ဘယ်တော့မှ မင်းတို့ ပြန်မလာနဲ့တော့ ။ သနလို့။
သောက်ရူး မိုးသီးနဲ့ အပေါင်းအပါတွေဒီ ပို့စ်ကို တင်ထားတုံးပဲလား။ ခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ အုပ်စုပဲ။
Because of wire short inside, the lamp post from outside will blackout??? What kind of stupid you are??? It's show that you are non educated and useless brain... Hay Stupid, learn before you type..
To all the those washed up/ sold out people who never really want to see Burma as prosperous country ( you know who you are, your group, some group from Burma Thailand border, Dr Maung Zar Ni), people already realized that you guys just want to earn easy cash in the names of dirty politics.
Please go away further from politics and your mother land-Burma. We don't need you, not now or not in the future.
Even kids know your useless, brainless, pointless accusation and craziness.
That's lowest of the low standard of makingaliving.